Landa i-Meitu – Beauty Cam, Easy Photo Editor apk yakamuva yakamuva App yi-Meitu (China) Limited yamadivayisi we-android
Ikhasi Lasekhaya izinhlelo zokusebenza IzithombeMeitu – Beauty Cam, Easy Photo Editor
Photo ukuhlela lokusebenza owenza konke ngawe
• Enye yezinhlelo zokusebenza ezihle kakhulu zokuhlela isithombe emhlabeni!
• Indlela ethuthuke kakhulu yokwenza izithombe zakho zihle
• Uhlelo lokusebenza lobuhle obuhle olungalinganiswa ngisho nangamakhamera ochwepheshe
Ixhaswe osaziwayo nabanamandla abaphambili, iMeitu uhlelo lokusebenza lwekhamera yobuhle obuhle ukwenza ngezifiso izithombe zakho. Zenzele wena nabangane bakho, engeza umbhalo, faka izihlungi, sula imvelaphi, nokunye okuningi!
• Azisekho izithombe ezithambile! Animate futhi uphilise them nge 10+ imiphumela yangempela futhi eyingqayizivele!
IMIPHUMELA YOKUZIPHATHA KWE-IIQUE ART
• Ukuzisika kobuchwepheshe obuguqula imidwebo yakho ibe yimifanekiso emangalisa!
• Khetha izinga lokuhlobisa okukhethayo
• Thola isikhumba esingenaphutha, amehlo acwebezelayo, ikhala elixegayo, amazinyo amhlophe, njll.
Yenza izithombe zakho zimangalisa futhi zibukeke!
• Imiphumela: engeza okokuhlunga ezithombeni zakho bese udala umuzwa ohlukile
• UMose: amboze noma yini ofuna ukuyifihla;)
• I-magic Brush: i-doodle phezu kwezithombe zakho ngezinketho ezihlukile zokuxubha
• Izengezo: yenza izithombe zakho ngokwezifiso ngokungeza ozimele, umbhalo, izitika
• I-Collage: hlanganisa izithombe eziningi zibe yikholaji eyodwa usebenzisa izifanekiso ezingaphakathi nohlelo, umbhalo, nezinketho zokwakheka
BUZA IZIKHALAZO ZAMABHODI
Yenza umzimba wakho uthandeke ngendlela othanda ngayo ngokusebenzisa imisebenzi engaphakathi nohlelo
• Isikhumba: bushelelezi, buqinile, ithoni bese ulungisa ukuqina kwesikhumba sakho ngendlela othanda ngayo!
• Izimpawu: qeda noma yimuphi umqubuko ongafuneki, izibazi, amabala, njll.
• Amehlo: khanyisa futhi wandise amehlo akho, futhi usule ngokuphelele imibuthano emnyama
• Umzimba Shape: Ufuna ukuba ngwe-curvier, slimmer, izicubu zomzimba, mfushane, noma mude? Noma ngabe ubuhle bakho buyathandani, kwenze konke ngeMeitu!
• Ngobuchwepheshe be-AI obudilikayo, i-Meitu auto ibona izici zakho zobuso futhi iyakwazi ukwengeza izitika ezi-cute motion noma imiphumela edonswa ngesandla ebusweni bakho ngenkathi uthatha ama-selfies.
LULA KANYE FUN
• Qhathanisa umsebenzi wakho nesithombe sokuqala kuzo zonke izindlela zendlela ngokuthepha okukodwa!
• Yabelana ngokushesha ngezithombe zakho ezihleliwe nabangane nomndeni ngokusebenzisa abezindaba zenhlalo
• Unenkinga? Vumela ochwepheshe bethu bazi ngezinkinga noma iziphakamiso esigabeni sethu sokuphendula!